သနပ္ခါး ႀကိဳက္သူေတြ သတိထားႏိုင္ေအာင္ ဖတ္ထားပါ
January 2, 2022 sonsonlinlin 0
ပြီးခဲ့တဲ့ရက် ကိုယ့်ရုံးနားရက်လေးမှာ ကိုယ်စားချင်တာလေး ဝယ်ရအောင်ဆိုပြီး အိမ်နားက သင်္ကန်းကျွန်းဘုရားလမ်းဈေးကိုသွားဖြစ်တယ်…။ ကိုယ်သွားချိန်က 10-30 ဆိုတော့ ဈေးဝယ်သူတော်တော်နည်းသွားပြီ။ဈေးကို ဝင်ဝင်ချင်းပဲ သနပ်ခါးတွေဖြန့်ခင်းေ ရာင်းနေ တဲ့ဈေးသည်နှစ်ယောက်တွေ့တယ်.. နှစ်ယောက်လုံးက အညာကလာတဲ့ ပုံစံလေးတွေ။ တစ်သည်ကတော့ အဖွားကြီးရောင်းတာ…။မြင်နေကျလည်း မဟုတ် … သူကလည်း အတင်းခေါ်တာနဲ့ ကုသိုလ်လည်းရ သမီးတွေကိုလည်း လိမ်းပေးရတယ်… သနပ်ခါး ကြိုက်တဲ့ သူငယ် ချင်းကိုလည်း လက်ဆောင်ပေးမယ် ဆိုပြီးတော့ ကိုယ်ထိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ…အဲ့အဖွားက အတင်းကို အများကြီး […]
အိပ္ရာမဝင္ခင္မိန္းကေလးတိုင္းလုပ္သင့္တဲ့အခ်က္ (၅) ခ်က္
၁ – မိတ်ကပ်ဖျက်ပါ မိတ်ကပ်ဟာ သင့်ချွေးပေါက်တွေကို ပိတ်ထားပါတယ်။ တစ်နေကုန်လျှောက်သွားတဲ့အခါ မိတ်ကပ်မှာ အညစ်အကြေးတွေ၊ ပိုးမွှားတွေ ရှိနေပါတယ်။ ၂ – သွားတိုက်ပါ သွားတိုက်တဲ့အခါမှာလည်း အနည်းဆုံး ၂ မိနစ်ကြာအောင်တိုက်သင့်ပါတယ်။ သွားကျန်းမာရေး ချို့တဲ့မှုဟာ သင့်တစ်ကိုယ်ရေ ဘဝကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ၃ – lotion လိမ်းပါ အိပ်ရာမဝင်မီ lotion လိမ်းပါ။ အိပ်နေတုန်းမှာ lotion ဟာ အရေပြားတွေထဲစိမ့်ဝင်သွားပြီး ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပေးပါ […]
မ်က္ႏွာေပၚက တင္းတိတ္နဲ႔ ေနေလာင္အမဲကြက္ အျမန္ဆုံးေပ်ာက္ကင္းနည္း
မျက်နှာပေါ်က တင်းတိတ်နဲ့ နေလောင်အမဲကွက် အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းနည်း လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေး ကြည်လင်ဝင်းပ သန့်စင်နေတာကိုပဲလိုလားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်အမျိုးသမီး အမျိုးသားလေးတွေ အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒက ကိုရီးယားမင်းသား မင်းသမီးလေးတွေလို ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင် ဖွေးသန့်နေတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်လေးတွေ ဖြစ်ချင်ကြတာပါ။ အမှန်ပါပဲ၊ မျက်နှာပေါ်က တင်းတိတ် နေလောင်အမဲကွက်တွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသွင်အပြင်ကို ရုတ်လျော့စေပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ တင်းတိတ်အမဲစက် ပျောက်ဆေးတွေ ရောင်းနေကြပေမယ့် ပေးရတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ တစ်ကယ်ရော ပျောက်ကင်းပြီး အလုပ်ဖြစ်ကြပါရဲ့လား.. […]
တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္အသက္ေပးမတတ္ ခ်စ္ေနေပမယ့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဝးရမလိုျဖစ္ေနတဲ့ ခ်စ္သူေတြအတြက္
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အသက်ပေးမတတ် ချစ်နေပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဝေးရမလိုဖြစ်နေတဲ့ ချစ်သူတွေအတွက် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အသက်ပေးမတတ် ချစ်နေကြပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဝေးရမလိုဖြစ်နေတဲ့ ချစ်သူတွေ. ဘဝခရီးကို ရာသက်ပန်လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ယတြာ.လိုအပ်တာတွေက.. ၁။ ရေတော်ကပ်လှူဖို့ ဖန်ခွက်အကြည် ၂လုံး ၂။ ပန်းကန်ပြား အလတ်( quater plate)၁ချပ် ၃။အပြစ်အနာအဆာကင်းတဲ့ စွယ်တော်ရွက် ၁ ရွက် ။ ဆောင်ရွက်ရမှာက ၁။ အပြစ်အနာအဆာကင်းတဲ့ စွယ်တော်ရွက် ၁ […]
ေျခစြယ္ငုပ္ ၿပီဆိုရင္ ဒါေလးေတြ သိထားပါ
ခြေစွယ်ငုပ် ပြီဆိုတာနဲ့ ခြေချောင်း တစ်ခုလုံး နာကျင်ပြီး ယောင်ရမ်း ကာ အနေရခက်စေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင် အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်သလဲဆိုတာ သိထားရအောင် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ အခံရခက်တဲ့နာကျင်မှု ခံစားရတဲ့ ခြေစွယ်ငုပ် တာဟာ ရှည်ထွက်လာတဲ့ ခြေသည်း ချွန်ချွန်က ခြေချောင်းအသားထဲကို ထိုးဝင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ နာကျင်မှု အသေးစားလို့ ထင်ရပေမယ့် သေချာမကုဘူးဆိုရင် ခြေချောင်းထဲ ရောဂါပိုးဝင်တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး။ အရမ်းကျပ်လွန်းတဲ့ဖိနပ်တွေ၊ ခြေစွပ်တွေသုံးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခြေသည်း […]
ေခ်ာင္းဆိူးတာကို လုံးဝ ရပ္သြားေစမဲ့ ေဆး​နည္းေလးပါ
နေ့စဉ်ရက်ဆက် ချောင်းဆိုးရင်ကျပ် ဖြစ်နေတာရက် ၂၀ ကျော်နေပြီ။ ဖြစ်ခါစ တပါတ်လောက်အထိ နေ့တိုင်း ဆေးခန်းသွားပြတယ်။ မသက်သာဘူး။ လေပြွန်ရောင်တာနဲ့. ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်တွဲဖြစ်တော့ နေရဆိုး ဆေးမျိုးစုံ ဝယ်သောက် ဒါလဲ မပျောက်ဘူး။ ရက် ၂၀ ကျော်လာတော့ လူကြီးတွေက စိုးရိမ်လာလို့ အထူးကုနဲ့ ပြတော့ ဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူး ဆိုပြီး ဆေးရုံသွားဖို့ စီစဉ်နေတုန်း အိမ်ကို ရွာက ဦးလေး အလည်ရောက်တာနဲ့ ကြုံရော။ ဦးလေးက နေဦး […]
ရွိစုမဲ့စုေလးနဲ႔ ကားဝယ္မယ္ဆို ဒီအခ်က္ေတြကို ေသခ်ာစစ္ပါ
ကားဝယ်သူတွေထဲမှာ မသိတဲ့သူအများကြီးရှိပေမယ့် ကားဝယ်ရောင်း၊ပွဲစားလုပ်ကိုင်သူတွေအဖို့တော့ လုပ်နေကျပါဘဲ။ မလိုအပ်ရင် ကားမဝယ်ပါနဲ့ ။ ဝယ်ရပြီဆိုရင်တော့ ကားဘယ်လောက်ကြိုက်ကြိုက် ငွေတခါတည်းချေတာမျိုးကို လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ခုတလောတွေ့နေရတဲ့ ဝယ်ပေးရောင်းပေးလိုက်သမျှကားအားလုံး ယဉ်စစ်ဆေးခြင်း၊ပြစ်မှုမှတ်တမ်းစစ်ဆေးခြင်းလုံးဝမရှိကြတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ဝယ်သူ‌တွေသိပ်နစ်နာပါမယ်။တာဝန်ယူသူအနည်းငယ်ကတော့ ရောင်းလိုက်တဲ့ကားတစ်စုံတစ်ရာဆိုရင် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပေမယ့် ကားပွဲစား၊ဝယ်ရောင်းလောကမှာ ရှိတော့ရှိတယ် ရွှေထက်ရှားပါတယ်။နစ်နာစရာရှိရင် အရင်နစ်နာသူက ဝယ်မိသူပါ။ ဒါကြောင့် ကားတစ်စီးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကြိုက်ကြိုက် ငွေတန်းချေခြင်းလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။တာဝန်ယူတယ်ပြောလဲ မလုပ်ပါနဲ့။ ၁။စရံအရင်ချပါ။ ၂။ စရံချပြီးတဲ့ကားကို ကီလိုဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ယူပါ(ကီလိုလျှော့နေကျသူတွေဆီက ကားဆိုရင်တော့ မထူးပါ) […]
ဗိုက္ဆာလို႔ ေက်ာင္းမွာ လာေတာင္းစားေနတဲ့ သူေတာင္းစားကို ဘုန္းႀကီးက အုပ္ခဲပုံေ႐ႊခိုင္းလိုက္ေသာအခါ…
ဗိုက်ဆာလို့ ကျောင်းမှာ လာတောင်းစားနေတဲ့ သူတောင်းစားကို ဘုန်းကြီးက အုပ်ခဲပုံရွှေခိုင်းလိုက်သောအခါ… ဗိုက်ဆာလို့ ကျောင်းမှာ လာတောင်းစားနေတဲ့ သူတောင်းစားကို ဘုန်းကြီးက အုပ်ခဲပုံရွှေခိုင်းလိုက်သောအခါမှာ.. တစ်နေ့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းကို လက်တစ်ဖက်တည်းရှိတဲ့ သူတောင်းစားတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး စားစရာလာတောင်း စားတယ် ..အဲ့မှာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးနဲ့ တိုးတော့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဆီမှာ စားစရာတောင်းတယ်။ ဆရာတော်က ဆွမ်းစားဆောင်ရှေ့ က အုတ်ပုံကို လက်ညိုး ထိုးပြ ပြီး “ဒကာတော် အဲ့ဒီအုတ်ပုံကို […]